စာစုတို | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 35
မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) – သတိ … အန္တရာယ်က… လက်တကမ်းမှာ …. (မိုးမခ) မေ ၁၇၊ ၂၀၁၅ ဇာတ်ညွှန်း ဇာတ်ကွက်အရ… အပိုအလိုမရှိ ပီပီပြင်ပြင် သရုပ်ဆောင်ကပြ အသုံးတော်ခံနေတဲ့ ပြဇာတ်ကလေးက ပြီးလု ပြီး ခင်အချိန် နောက်ဆုံးအပိုင်းရောက်ခါနီးခါမှ၊ ဟုတ်နိုး ဟုတ်နိုးနဲ့ ဇာတ်မျောလာနေရာက အဖြူ အမဲ ခွဲခြားလို့ရနေပါပြီ။ ဖားလား … ? ငါးလား … ? ပုံသဏ္ဍာန်ခွဲ သိမြင်နေရပါပြီ။ ဆန့်ကျင်ဖက်အနေအထား အခင်းအကျဉ်းမှာ… ထိပ်တိုက် အားပြိုင်ရင်ဆိုင်ပြီး အောင်ပန်းဆွတ်နိုင်ဖို့အရေး သန်း ၅၀ ကျော် ပြည်သူတွေနဲ့ သူတို့တတွေရဲ့ ပင်တိုင်စံ အိပ်မက်ရှင်မင်းသမီး ဆုံတွေ့ပေါင်းစည်းစေနိုင်မဲ့အရေး၊ ဇာတ်သိမ်းချိန် ရောက်ခါနီးမှ မြင်လာ တွေ...
လှကျော်ဇော – ကဗျာလေးတပုဒ် (မိုးမခ) မေ ၁၆၊ ၂၀၁၅ ကျွန်မတို့မြို့မှာဆေးလာကုနေတဲ့ မိတ်ဆွေတဦးက တနေ့မှာ စာရွက်လေးတရွက်ပေးရင်း ဒီလိုပြောလာပါတယ်။ “ကျွန်တော် ဗျာ အဘိုးကြီး ဆုံးတယ်ကြားကြားချင်း ဒီကဗျာကိုရေးခဲ့မိတယ်။ ပြီးတော့ ခင်ဗျားကို မပေးဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်း ဘယ်ထဲရေးမိမှန်းမသိဘူး။ သတိရတော့ရှာတာ ဘယ်မှာမှ ရှာမတွေ့ခဲ့ဘူး။ ဟိုတပတ်ကမှ မိတ်ဆွေတယောက်က သူ့စာစောင်ရှာပေးပါဆိုလို့ ရှာရင်းက စာအုပ်တအုပ်ထဲမှာ ဒါကိုသွားတွေ့တယ်။ အတော်နောက်ကျသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့ ခင်ဗျား တို့ကစာအုပ်တွေမပြတ်ထုတ်နေတော့ ကြုံတဲ့နေရာမှာ သုံးပေတော့ …”တဲ့။ အဲဒီသူက ဖေဖေနဲ့ပန်ဆန်းမှာအတူတွဲ အလုပ်လုပ်ခဲ့သူပါ။ကျွန်မတို့တတွေနဲ့က တိုက်ဖော်တိုက် ဖက် ရဲဘော်ဟောင်းများပေါ့။ ဖေဖေကွယ်လွန်ပြီး (၂၀၁၂-အောက်တိုဘာ-၁၀ ရက်) ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ “အရေးတော်ပုံ” ဂျာနယ်ရဲ့ “ရဲဘော်ဦးတင်သို့ ကန် တော့ပန်းကဗျာများ” အခန်းအတွက်ရော ကွယ်လွန်ပြီး...
ကိုသစ် (သီတဂူ) လက်ညှိုးညွှန်ရာ မြေဖြစ်သတဲ့လား (မိုးမခ) မေ ၁၆၊ ၂၀၁၅ (တစ်) ယခုတလော ဟိုးလေးတကျော် ဖြစ်နေသော အသံများမှာ ကြပ်တယ် ကြပ်တယ် ဟူသောအသံနှင့် သိမ်းတယ် သိမ်းတယ် ဟူသော စကားသံများပင်ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ဘယ်နေရာကိုပဲ သွားသွား ကြပ်တယ် ကြပ်တယ်ဟူသောအသံကို လူတိုင်းဆီမှ ကြားနေရပါသည်။ လှည်း တန်းမှာလည်း ကြပ်၊ မြေနီကုန်းမှာလည်း ကြပ်၊ သမိုင်းမှာလည်း ကြပ်၊ မြို့ထဲမှာလည်း ကြပ်၊ ဗိုလ်တစ်ထောင် ကြပ်၊ ဘုရား လမ်းမှာ ကြပ် စသည်စသည်ဖြင့် ဘယ်နေရာကိုပဲသွားသွား တကြပ်တည်း ကြပ်နေပါတော့သည်။ ဆယ်မိနစ်လောက်သွားရမည့်နေရာကိုပင် နာရီနှင့်ချီ၍ ကြာတတ်သည်ဖြစ်ရာ တချို့ကားသမားတွေက အဆိုပါ ကားကြပ်သောနေရာများဆီသို့ သိပ် မလိုက်ချင်ကြတော့။ အထူးသဖြင့်...
အောင်ဝေး – ကက်ကင်း မိတ်ဆက် အဝေးက သ၀ဏ်လွှာ
အောင်ဝေး – ကက်ကင်း မိတ်ဆက် အဝေးက သ၀ဏ်လွှာ (မိုးမခ) မေ ၁၆၊ ၂၀၁၅ WIN AUNG & AUNG WAY – က က် က င်းစာအု ပ် မိ တ် ဆ က် ပွဲ သို့ ။ အားလုံး မင်္ဂလာပါ။ ကြွရောက်လာသူအားလုံး ကြည်သာချမ်းမြ ရှိကြပါစေလို့ဦးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။ အခုလို ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့ စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲကလေးကို တက်ရောက်လာကြသူ၊ စာပေအနုပညာလောက၊ သတင်းမီဒီယာလောက၊ နိုင်ငံရေးလောကတွေက ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ရဲဘော် သူငယ်ချင်း...
မင်းကိုနိုင် – ဂါရ၀ ခဲကြမ်း မေ ၁၃၊ ၂၀၁၅ တက္ကသိုလ်နယ်မြေ ဟိုအရင်ကျနော်တို့ မရောက်မီခေတ်များက ဟောပြောပို့ချချက်ကောင်းသည့် ဆရာများအချိန်တွင် သက်ဆိုင်ရာ အတန်းသားများသာမက အဓိက အထူးပြုဘာသာရပ်မတူကျောင်းသားများပါ စိတ်အားသန် လာနားထောင် လေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ခန်းလုံးပြည့်သာမက အခန်းဘေးစင်္ကြန်များဆီပါ ပြည့်နှက်လျှက် ထိုပို့ချသူ ဆရာများထဲတွင် ဆရာကြီး ဦးခင်မောင်လတ်လည်း အပါအ၀င်။ သူ့ပို့ချချက်တွေက ကျောင်းစာမေးပွဲအတွက်သာမက ဘ၀စာမေးပွဲအတွက်ပါ အကြုံး ၀င်သည်ကိုး။ တနှစ်စာမက တသက်စာ တန်ဖိုးရှိသည်ကိုး။ တက္ကသိုလ်မြေ “ပြည်-တကောင်း”ဆောင်၊ လိပ်ခုံးဆေးတက္ကသိုလ်အနီး ဆရာကြီးနှင့် ဇနီးဒေါ်ခင်မျိုးချစ်တို့ နေခဲ့သည့် “အေးရိပ်သာ”သည် တချိန်က ပညာရပ်ဝန်း၏ အမှတ်တရတခုဖြစ်ခဲ့သည်။ နောင်တချိန်တွင် ထင်ရှားသည့် စာရေး ဆရာ ပညာရှင်အလောင်းအလျာများ ဆုံစည်းရာလည်းဖြစ်သည်။ စာရေးဆရာထင်လင်း၊ ဆရာမကြည်အေးတို့လည်း ထို...
စိုးနေလင်း – ဘီလူးစည်း လူ့စည်း
စိုးနေလင်း – ဘီလူးစည်း လူ့စည်း (မိုးမခ) မေ ၁၂၊ ၂၀၁၅ ရာသီဥတုက ပူအိုက်စွတ်စိုနေဆဲ။ အိမ်ရှေ့ကွင်းပြင်ကျယ်ကြီးကိုဖြတ်ပြီး ဟိုးဝေးဝေးတောင်တန်းကြီးတွေဆီက တိုက်ခတ် လာနေတဲ့လေက အတော်လေးအေးမြလေတော့ တော်သေးရဲ့လို့ တွေးလိုက်မိတယ်။ ကြည့်နေမိတဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာ တွေပေါ်က ပြည်တွင်းသတင်းတွေကလည်း ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူချိန်ကို မြင့်တက်လာစေနိုင်၊ သွေးလည်ပတ်မှုကိုလည်း မြန် ဆန်လာစေနိုင်တယ်ထင်ပါရဲ့။ တခါတလေ လူတချို့ရဲ့ စဉ်းစားတွေးမြင် ခံစားပုံတွေကို နားမလည်နိုင်ဖြစ်ရတယ်။ ရမယ့် အခွင့်အရေးလေးကမဖြစ်စလောက် သုံးစွဲခွင့်ရဖို့အရေး အောက်ကျို့ ရိုကျိုးနှိမ့်ချရမယ့် စစ်သွေးစစ်မာန်တက်နေတဲ့ မျက်နှာ တွေက အစီအရီထိုင်ခုံကြီးတွေပေါ်မှာ စစ်ယူနီဖောင်းအပြည့်အစုံဝတ်ပြီး အစွမ်းကုန်တင်းမာနေတဲ့ မျက်နှာထားကိုယ်စီနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကို ကယ်တင်ထားရတဲ့ပုံစံမျိုး။ တနိုင်ငံလုံးက ပြည်သူလူထုကြီးကို တင်ကျွေးထားရတဲ့ ပုံစံမျိုး။ အရပ် ၀တ်တွေကတော့ ကျားသနားသော နွားချမ်းသာများပေပ။ မျက်နှာကို...
နေ၀န်းနီ (မန္တလေး) – ​ရွှေမန်းသာသနာ
နေ၀န်းနီ (မန္တလေး) – ​ရွှေမန်းသာသနာ (မိုးမခ) မေ ၁၀၊ ၂၀၁၅ မန္တ​လေးနှင့်​သာသနာ၊ သာသနာနှင့်​မန္တ​လေး ခွဲခြား၍မရနိုင်​။ အမြဲပင်​ ဒွန်​တွဲလာခဲ့သည်​။ ထို့ကဲ့သို့ သာသနာနှင့်​ မန္တ​လေး အမြဲဒွန်​တွဲလာနိုင်​​အောင်​လည်း သာသနာပြုဘုရင်​ အရှင်​မင်းတုန်းမင်းတရားကြီးက သာသနာ့မျိုး​စေ့​ကောင်းများ စိုက်​ပျိုး ခဲ့ခြင်း​ကြောင့်​ဖြစ်​သည်​။ မင်းတုန်းမင်းတရားကြီးပြုစုပျိုး​ထောင်​ခဲ့​သောသာသနာသည်​ မန္တ​လေးမြို့၌ ယ​နေ့တိုင် ထွန်း​ပြောင်​​နေခဲ့သည်​။ ဤသို့ပြုစုပျိုး​ထောင်​ခဲ့သည့်​သာသနာပြုစိတ်​သည်​ ယ​နေ့တိုင်​ မန္တ​လေးသူ မန္တ​လေးသားများစိတ်​၌ အမြစ်​တွယ်​လျှက်​ရှိ​သော သာသနာပြုစိတ်​ကို “၁၂၅၇ ခုနှစ်​“ ကတည်းက တည်​​ထောင်​ထားသည့်​ သာသနာ့မိခင်​ကြီးဖြစ်​သည့်​ “မလွန်​ဆန်​လှူအသင်းကြီး” က မီး​မောင်းထိုးပြထား​ပေသည်​။ မန္တ​ လေးမြို့ဗြိတိသျှနယ်​ချဲ့လက်​​အောက်​ကျ​ရောက်​သွားပြီး မန္တ​လေးမြို့သူ မြို့သား​တွေအ​နေနဲ့ ရုတ်​တရက်​ ဘာလုပ်​လို့ ဘာကိုင်​ရမှန်း မသိ​တော့​ပေ။ သို့​ပေမယ်​ ​လေးငါးဆယ်​နှစ်​ကြာတဲ့အခါမှာ​တော့ ဘာသာ၊ သာသနာ့အ​ရေး​တွေကို စုရုံးပြီး စတင်​လှုပ်​ရှားကြတယ်​။...
ရှင်းသန့်မေ – အမေများနေ့အမှတ်တရ
ရှင်းသန့်မေ – အမေများနေ့အမှတ်တရ (မိုးမခ) မေ ၉၊ ၂၀၁၅ ——————————– အမေများနေ့ဆိုတာ လူသားတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေ့လေးတနေ့ပါပဲ။ အမေရင်မှဖြစ်ထွန်းလာတဲ့ရင်သွေးတိုင်းအတွက် အမေ နေ့ဆိုတာ သက်ဆိုင်ပါသည်။အမေလို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့ ရင်မှာ အေးချမ်းမှု ပျော်ရွင်မှုတွေ နွေးထွေးမှတွေ ကြည်နူးမှု ခံစားမှုပေါင်းများစွာကို လူတိုင်းခံစား ရကြမှာပါ။ အမေမေတ္တာသည် အတိုင်းအတာ ပမာဏမရှိသောမေတ္တာမျိုးဖြင့် သားသ္မီးတွေအပေါ် ချစ်မြတ်နိုးခဲ့ကြသည်။ ထို့ပြင် သား သ္မီးတွေ မညောင်းသောလက်တို့ဖြင့် လွဲခတ်စေကာ မှေးစက်အိပ်ပျော်စေခဲ့သည်။ အသက်ကိုရင်းနှီးပြီး သားလား၊ သမီး လား မသိရသေးသော ကလေးလေးကို ကိုယ်ဝန်လွယ်ကာမိခင်တို့ မေတ္တာအပြည့်နဲ့ မသိရသေးသော ကလေးလေးအတွက် အရှက်တရား အကြောက်တရားတွေ ခဏတာသိမ်းထား သေမင်းကိုမျက်စောင်းထိုးကာ မွေးဖွားခန်းထဲမှာ ခွန်အား တွေ အပြည့်နဲ့ မွေးဖွားပေးခဲ့သည်။...
စိုးနေလင်း – ကျွန်ုပ်နှင့် ဘုရားသခင်မဖန်ဆင်းသောသူများအကြောင်း
စိုးနေလင်း – ကျွန်ုပ်နှင့် ဘုရားသခင်မဖန်ဆင်းသောသူများအကြောင်း (မိုးမခ) မေ ၂၊ ၂၀၁၅ “ဤကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်တွင် ငြိမ်သက်ခြင်း ရှိစေသတည်း” (သမ္မာကျမ်းစာ) အဲဒီစာသားလေးကို စဖတ်မိတဲ့အချိန်ကစပြီး နှစ်သက်သဘောကျသွားမိတယ်လို့ ၀န်ခံရမှာပါပဲ။ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတခုရဲ့ရှေ့မှာထင်ပါရဲ့။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ သမ္မာကျမ်းစာအုပ်မှာ အဲဒီစာသားလေးကို ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ သတိထားမိသလောက် တီဗီဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ မြင်ရ ကြားရခဲ့သမျှ ကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်မှာ အဲံဒီစာသားနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်တွေ ကိုပဲ တွေ့နေရတယ်ဆိုရင် မှားမယ်မဟုတ်ပေဘူး။ လူမျိုးရေးမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုတွေ၊ ယဉ်ကျေးမှုခြင်းထိခတ် ပဋိပက္ခ ဖြစ်မှုတွေ၊ အာဏာရှင်စနစ်တခုရဲ့ ဖိနှိပ်မှုတွေကို ဆန့်ကျင်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတဲ့ စစ်ပွဲတွေ၊ဘာသာရေးအစွန်းရောက်တွေရဲ့ လွှမ်းမိုးချယ်လှယ်ရေးစစ်ပွဲတွေနဲ့ တခြားသံတူကြောင်းကွဲ ကြောင်းကွဲသံတူ စစ်ပွဲငယ် စစ်ပွဲလတ် စစ်ပွဲကြီးတွေ စက်သေ နတ်သံ အမြောက်သံ ရော့ကက်လောင်ချာသံ ဒုံးကျည်ပေါက်ကွဲသံ မိုင်းဗုံးပေါက်ကွဲသံတွေ...
စံပယ်ဖြူ – အဆင်မပြေမှုများနဲ့ မြန်မာပြည် (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၈၊ ၂၀၁၅ မြန်မာပြည်ကို (၅) လတိတိ ပြန်ရောက်နေချိန်မှာ စိတ်ဘ၀င်မကျစရာ အကြောင်းအရာတွေကိုပေါင်းစုပြီး စာတပုဒ် ချရေး လိုက်ပါတယ်။ ဘယ်အရာမဆို အဆင်ပြေသလို လုပ်နေကျတဲ့အကျင့်၊ နားလည်မှုနဲ့လုပ်ကြတယ်ဆိုတဲ့ ဓလေ့တွေ အရိုးစွဲ နေတာ သူ့ဟာသူတော့ အဆင်ပြေနေကြပါတယ်။ အရာရာတိုင်းကို စည်းကမ်းတကျ၊ စနစ်တကျ ဖြစ်စေချင်သူတွေအတွက် အဲဒီနားလည်မှုဆိုတဲ့ဟာတွေက စိတ်ဘ၀င်မကျစရာပါ။ အသေးအမွှားကိစ္စလေးတွေလို့ထင်ရပေမဲ့ ပြုပြင်သင့်တာတွေမို့ မြင်တွေ့ခဲ့သမျှကို ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်တုန်း သက်တမ်းကုန်နေပြီဖြစ်တဲ့ ကျွန်မရဲ့ သူနာပြုလိုင်စင်ကို သက်တမ်းတိုးဖို့ သူနာပြု သားဖွား ကောင်စီမှာ ဖောင်သွားယူပြီး၊ လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေ ပြင်ဆင်ရပါတယ်။ ရဲစခန်းထောက်ခံစာပါ လိုအပ်တဲ့အတွက် ရွာပြန်တော့ ကျုံပျော်မြို့နယ် ရဲစခန်းမှာ ထောက်ခံစာသွားယူပါတယ်။...
Page 35 of 39«1...3334353637...39»
ဖိုးထက် - ကျွန်တော့်လောဘတွေ
မောင်တမ်းတ ● ပါးစပ်တစ်ပေါက်၏ မေတ္တာစာ
မင်းကိုနိုင် - “နောက်တန်း အစွန်လူ”
ထွ ဋ်ခေါ င် ဖြိုး- ကလေးသ င်္ကြ န်
ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့ ထမင်းငတ်တော့မယ် ဆရာတို့ရယ် … https://t.co/99ibzNA03D https://t.co/ZAATA5EsyA about 12 minutes ago ReplyRetweetFavorite
ဆောင်းယွန်းလ ● ရေလောင်းမိခဲ့တဲ့ အဆိပ်ပင်တွေအကြောင်း https://t.co/2m2fCVcCGq https://t.co/UCA14F3P5a about 19 minutes ago ReplyRetweetFavorite
စိုးခိုင်ညိန်း ● မြို့ပြရန်ကုန် https://t.co/J2mwTk28US https://t.co/wY4lppLMAW about2hours ago ReplyRetweetFavorite